Hulled हेम्प बीज | भांग बीज | Hulled बीज - मद्दत MEHemp
घर उत्पादन Hulled हेम्प बीज
Hulled हेम्प बीज
मद्दत MEHemp's Hulled हेम्प सीड स्वादिष्ट पौष्टिक हुन्छ! मात्र। हल्लेड बीजको चम्चाले तपाईंलाई १० ग्राम प्रोटीन प्रदान गर्दछ, उनीहरूलाई विश्वमा प्रोटीनको उच्चतम सब्जी स्रोत बनाउन।
यसलाई हेम्प हार्ट पनि भनिन्छ, हेम्प बीउहरूले पहिले नै आफ्नो बाहिरी खोल हटाइसकेका छन्, एक प्रक्रिया जसले तिनीहरूलाई अझ पौष्टिक बनाउँदछ! मद्दत MEHemp's Hulled हेम्प बीज बीजमा कुनै ट्रान्स फ्याट, कोलेस्ट्रॉल, ल्याक्टोज, वा सोडियम हुँदैन। तिनीहरूमा फाइबर र ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडहरू अत्यन्त उच्च हुन्छन्, तर सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, ती ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडहरू (जीएलए) को साथ गम्भीर छन्, जुन अरू धेरै खानाहरूमा पाउन गाह्रो छ। अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली ओमेगा3र ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडहरूको सन्तुलनमा पूर्ण निर्भर छ। हेम्प बीज ओमेगा6को उत्तम आहार स्रोत हो र पॉलीअनसेच्युरेटेड र आवश्यक फ्याट्टी एसिडहरूको उत्कृष्ट स्रोत हो, जुन सबैले पूरै शरीरभरि सर्कुलेशन परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
शिष्टाचारको सहायता MEHemp, हाम्रो प्याकेजि्गमा सम्पूर्ण परिवारलाई खुशी पार्ने हेम्प मिल्कको लागि एउटा अविश्वसनीय स्वादिष्ट विधि समावेश गर्दछ। हाम्रो आफ्नै परिवारलाई तल हेर्नुहोस् वा YouTube मा मद्दत गर्नुहोस् हेरल्पमहेम्प।
तपाईंको स्वाद कलियहरू समृद्ध, नट स्वादको साथ जीवित हुनेछ मद्दत MEHemp's Hulled हेम्प बीज। यी ग्लूटेन-रहित, गैर-GMO कोशेर हम्प बीउहरू तपाईंको स्मूदीहरू, दही, अन्नकार, सलाद, र अधिकमा थपेर स्वस्थ र जीवनको पूर्ण महसुस गर्नुहोस्!
अवयवहरू: जैविक hulled हेम्प बीज
आकार 8 ओउंस 16 ओउंस 8.8 ओज गिलास
14 समीक्षाहरूमा आधारित एउटा समीक्षा लेख्नुहोस्
प्रेम हेम्प बीज। सबै कुरामा उत्कृष्ट। धेरै ताजा
यिनीहरूलाई माया गर्नुहोस् !! मेरो दहीमा राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई हलचल फ्राईमा छर्कियो जुन पहिले नै (केवल एक दिनको लागि थियो)! स्वाद र प्रोटीन को महान स्रोत को टन। निश्चित अधिक खरीद हुनेछ।
म hulled बीउ प्रेम! म तिनीहरूलाई बिहानको खाजामा थप्दछु र उनीहरूले मलाई लगभग from०० देखि १ 700०० सम्म भरि राख्छन्। एक्लै खाएमा, उनीहरूसँग अद्भुत, सांसारिक स्वाद हुन्छ जुन खानाहरू लाई बढावा दिदैन, बिटमा यसले अरू स्वादहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दैन यदि यो मिसिएको छ भने। यम यम!
प्रेम, प्रेम, यी सानो बीउ प्रेम। म तिनीहरूलाई मेरा फल सलादहरू, स्मूदीहरू, नियमित सलादहरू, स्याउपस, दही र अन्य चीजहरूमा थप्दछु जुन उनीहरूले मेरो प्रोटीन सेवन गर्न सक्दछन्। मैले वजन घटाउने समस्या भोगेको छ, यो एक बर्ष भन्दा बढि समान नम्बरमा रहन्छ। बीज थपेदेखि मेरो चिनी लालसा कम हुँदै गइरहेको छ र स्केल चल्न थाल्छ। यो मेरो लागि एक ढिलो प्रक्रिया हो, तर बीउ थपेर म llbs भन्दा कम हुँ। पछिल्ला २ महिना भन्दा बढि
ओमग यी साना बच्चाहरू सुपर स्वादिष्ट हुन्! शेल पागलपन बिना सूर्यफूल बीउ जस्तै! म तिनीहरूलाई दही, रातरात ओट्स, स्मूदीहरू, सलादमा थप्दछु, कहिलेकाहिँ मेरो स्पगेटीको कचौरामा! वा केहि मुट्ठीहरू सादा खानु। जे भए पनि! तिनीहरूले महान स्वाद र कुनै पनि खाना वा खाजामा केही गम्भीर भर्न जोड्न। अत्यधिक सिफारिश पनि!
म दहीमा प्रयोग गर्दछु, म भैंसाको दूध बनाउछु जब म भोको छु, तौल अवलोकनका लागि, अण्डा सलादमा राख्नुहोस्, सलाद एन्स्क्र्याम्ड अण्डाहरू, यम।
प्रोटीन प्याक मैले मेरो बिहान दहीमा ताजा फलफूलका साथ दैनिक एक देखि दुई चम्चा थप्न थालें। मैले याद गरे कि दुई दिन भित्र मैले खाजा खानु शुरू गर्यो। निश्चित रूपले तपाईंलाई भर्दछ र चिनी लालसा कम गर्दछ। यी बीउहरूलाई माया गर्नुहोस्। यी प्रस्ताव प्रोटीन प्रेम!
sooooooooooooo राम्रो म तिनीहरूलाई एक dixie कप को सीधा बाहिर खाने :) :) मैले भर्खर दुध को मेरो पहिलो झुण्ड बनाएको !!! ओमगोश सुओ राम्रो। मँ विश्वास गर्न सक्दिन मलाई यो लागी लामो समय लाग्यो
हेम्प हूल्ड सीड्स - यो मेरो सबैभन्दा मनपर्ने लत हो - हेम्प हूल्ड सिड्स .. .... तिनीहरू धेरै शुद्ध र स्वादिष्ट हुन्छन् !!!! यसले मेरो शरीरलाई चाहिएको कुरा दिन्छ। म मुख्यतया यो मेरो दैनिक पोषणमा केवल इन्फ्लेक्सन - फाइब्रोमाइग्लियासँग लड्नको लागि सेवन गर्दछु तर यसको साथसाथै यसले मेरो वजन घटाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ जुन म समय मा कुनै सुराग थिएन, किन म इन्च र तौल गुमाउँदै छु !! त्यहाँ एक ठूलो प्लस !! म यी स्वस्थ उत्पादनहरू र उनीहरूको अन्य उत्पादनहरूको पनि सिफारिश गर्दछु ... उनीहरूसँग मैले राम्रा गुणहरू उत्पादनहरू पाएँ। .. धन्यवाद केरी र बब र तपाइँका राम्रा केटाहरू! भगवान आशीर्वाद! ❤️
कुकुरहरु को लागी सुपर कोट! सात महिना पुरानो महान डेनलाई गम्भीर डर्मेटाइटिस थियो उसले मानसिक रूपमा खुजली गर्न नसक्ने औषधी स्प्रे औषधी खानुभयो केही परिवर्तन भएन जुन रसायनले जारी राख्न चाहान्छ कि कुकुरको खानामा सात दिनसम्म मेरो कुकुरको सुपर कोट छ र यो कुकुरको खानामा छ। साना पिल्लाले अब केहि पनि जित्न सक्दछ!
यिनीहरूलाई माया गर्नुहोस्! यी साना चीजहरू अद्भुत छन्। साच्चिकै उनीहरूको प्रयोगमा गए जुन अरूले के आशा गर्ने भनेर थाहा पाउँदैनथ्यो भने केहि कुरकुँरो मेरो सलादमा थप्नको लागि ताकि म croutons को उपयोग गर्न रोक्न सकुँ। केही हप्तामा र म सबै कुरा! बिहान दही, लन्चमा मेरो टुना र सलादमा साथै स्मूदीहरूमा। मसँग चिनीमा साँच्चिकै नक्कल लत छ र मैले याद गरिरहेको छु कि म यसलाई सामान्य जत्तिकै कडाइको तृष्णा गर्दिन। मँ उनीहरु लाई जोड्न पछि म पनि पूर्ण भावना राख्छु। र म तिनीहरूलाई मेरो छोराहरूको स्नैक्समा लुकाउँछु र उसले कहिले ध्यान दिँदैन! एक उत्तम उत्पादन !!
स्वाभाविक रूपले स्वस्थ! यी भँगुर बीजहरू हाम्रो दैनिक तालिकाको भाग हुन् - हेम्प मिल्कबाट, दलियाबाट, सलादमा, फलफूलमा, समेत घरेलु ग्रेनोला बारहरूमा छर्कियो! प्रेम, हेम्प बीज मलाई सहायता हेम्प बाट प्रेम !!!
महान स्वादको राम्रो नट स्वाद छ। यसलाई ग्रीक दहीमा प्रेम गर्नुहोस्। काल्पनिक बीज।
सुपर बीउहरू ती बीउहरू केवल अचम्मका छन् र तपाईं तिनीहरूलाई सबै कुरामा थप्न सक्नुहुन्छ। मैले तिनीहरूलाई मेरो वाफलको, सूपमा वा मेरो सलादमा टोपिंगमा राखें।
प्रेम प्रेम प्रेम प्राकृतिक चिकित्सा !! यी उत्पादनहरू आश्चर्यजनक भएका छन्। मेरो छाला धेरै स्वस्थ महसुस गर्दैछ र ओहायो मौसममा बस्न यसले मेरो ड्राई छालामा ठूलो फरक पारेको छ। स्मूदीज, हम्प दुध केही तरिकाहरू हुन् जुन हामी हिन प्रोटीनलाई हाम्रो आहारमा समावेश गर्दछौं। हेम्प तेल र प्रोटीनले ईन्फ्लेमेसनलाई मद्दत गरेको छ र मेरो स्क्याल्प छालरोगमा महत्वपूर्ण प्रभाव देखाएको छ। बडी बटरलाई माया गर्दै ... सुगन्ध आउँछ र अचम्म लाग्दछ र वास्तवमा निको महसुस हुन्छ। म यी उत्पादनहरूलाई अनिश्चितकालीन सिफारिस गर्दछु। प्रेम ... प्रेम ... प्रेम ... प्राकृतिक चिकित्सा
पहिलो पटक! यो मेरो पहिलो पल्टको लागि हेम्प बीउहरू प्रयोग गर्दैछ र म तिनीहरूलाई प्रेम गर्दछु! मँ तिनीहरूलाई ग्रीस दही राम्रो तरीकाले बनाउन को लागी रसबरी संग मिक्स गर्छु! तिनीहरूसँग एक नट स्वाद र बनावट छ। म भीम्प दुध पनि बनाउँछु र मेरो कफिमा यसलाई थप्छु। कस्तो राम्रो! अन्य सबै उत्पादनहरू प्रयास गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन